Twitter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto fiidiyowyada YouTube adigoon ka bixin barnaamijka | Wararka IPhone
Twitter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto fiidiyowyada YouTube adigoon ka bixin barnaamijka
Angel Gonzalez | 22/04/2021 20:00 | Barnaamijyada IPhone, Noticias
Shabakada bulshada ee Twitter ayaa horumar ballaaran sameysay bilihii la soo dhaafay. Dhowr usbuuc ka hor ayay ku dhawaaqday waxqabadka "Super Follow", oo ah aalad adeegsi ah si dadka isticmaala ay ugu soo dhowaadaan waxyaabaha gaarka ah ee gaarka loo leeyahay marka la bixiyo marinka. Intaas waxaa sii dheer, "Meelaha", qolalka maqalka ee isku dayaya in ay matalaan waaya-aragnimada ClubHouse, ayaa la tijaabinayaa, marka lagu daro Dalladaha, jilitaanka sheekooyinka Instagram. Maanta hal talaabo oo dheeri ah ayaa la qaaday iyo Waxay u oggolaaneysaa dib u soo celinta fiidiyowyada YouTube iyadoon ka tagin arjiga, marka lagu daro bilaabista tijaabada si loo raro oo loo daawado sawirada tayada 4K.
Soo rar oo arag sawirrada 4K: waxa ku cusub barnaamijka Twitter-ka
Twitter-ka ayaa ku dhawaaqay iyada oo loo marayo akoonkeeda rasmiga ah ee shabakadeeda bulshada wararka ku saabsan barnaamijkeeda rasmiga ah ee iOS iyo Android. Halku-dhigga ah "sawirku wuxuu u qalmaa kun eray", laba astaamood oo cusub ayaa la isku daray oo hagaajinaya tayada nuxurka maaddooyinka badan ee ka muuqda shabakadda bulshada, marka lagu daro hagaajinta waayo-aragnimada dadka isticmaala nuxurka noocan ah
Hada tijaabinta ku saabsan Android iyo iOS: marka aad sawir ka sameyso hal sawir, sida sawirka ugu muuqdo laxamiistaha 'Tweet' waa sida ay u eegi doonto jadwalka –wayn iyo ka fiican. pic.twitter.com/izI5S9VRdX
- Taageero Twitter (@TwitterSupport) March 10, 2021
Cusboonaysiinta ugu horreysa waxay ku dhacaysaa sawirro shaqsiyadeed loo soo raro. Wixii hada ka dambeeya, haddii aad hal sawir soo dhejiso, waxay u muuqan doontaa mid aad u ballaaran oo tayo wanaagsan leh, ayay ku leeyihiin Twitter-ka. Waxaa si gaar ah looga dhex muuqan karaa sawirada lagu soo rogay qaab toosan, inay helayaan qaraar aad u sareeya oo heysta ku dhowaad shaashadda oo dhan, iyagoo uga tegaya tweets kor iyo hoosba. Si loo helo sawirka oo dhammaystiran, isla nidaamka ayaa loo raaci doonaa sida hadda oo kale: adigoo gujinaya sawirka.
Sidoo kale, Qalab kale oo laxiriira sawirada ayaa bilaabaya in la tijaabiyo. Waa laga yaabaa ku soo dejiso waxyaabaha ku jira qeexitaan sare xallinta illaa 4K. Si aan u aragno haddii aan ku darno beta-ka shaqadan, waa inaan tagnaa gudaha gudaha ee barnaamijka Twitter oo aan qeexnaa xaaladaha aan ku soo dejin karno ama ku arki karno waxyaabahaas: had iyo jeer ama kaliya Wi-Fi.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, ikhtiyaarka ah ka daawo fiidiyaha Youtube arjiga adigoon ka bixin waqtiga. Waa hab lagu hagaajinayo khibradaha isticmaalaha lagana fogaado inaad ka tagto barnaamijka si aad u gasho biraawsarka ama barnaamijka YouTube.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Twitter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto fiidiyowyada YouTube adigoon ka bixin barnaamijka
Apple waxay horey u leedahay khariidadaha dib loo habeeyay ee Spain iyo Portugal marxaladda tijaabada
Furitaankii ugu horreeyay iyo dareenka koowaad ee Apple AirTags